MASY Goulamaly: Nohamafisin’ny CENI ny maha kandida depiote azy
mercredi, 20 mars 2019 19:27
Feno ny fepetra. Nohamafisin’ny Vaomieram-pirenena mahaleotena misahana ny fifidianana na CENI ny maha kandida an’i MASY Goulamaly amin’ny fifidianana solombavambahoaka hotanterahina amin’ny 27 mey 2019 ato amin’ny Distrikan’i Tsihombe, Faritra Androy.
Kandida miisa enina no hifaninana amin’ny toerana iray ato Tsihombe. Ny tsy miankina « INDEPENDANT MASY Goulamaly Marie Jeanne D'arc » no irotsahan’i MASY Goulamaly sy iatrehany ity hazakazaka mankeny Tsimbazaza ity.
Feno fahavononana tanteraka i MASY Goulamaly amin’ny fanohizana ny asa maha solombavambahoaka hiady ny tombontsoan’ny vahoakan’i Tsihombe, na ara-sosialy izany na ny ara-toekarena amin’ny fanorenana ireo foto-drafitrasa maro fanohanana ny tanora, fa indrindra ny tantsaha izay maro an’isa aty Tsihombe.
Porofon’izany, izy no kandida voalohany tonga nametraka ny antotan-taratasy firotsahan-kofidiany ho solombavambahoaka teo anivon’ny OVEC Tsihombe ary hany vehivavy amin’ireo kandida mpifaninana.
Manambady ary manan-janaka efatra i MASY Goulamaly. Renim-pianakaviana mahalala ny maika sy laharampahamena ho an’ity Distrikan’i Tsihombe ity ny tenany, ary tombony lehibe ho azy ny traikefa ananany noho ny andraikitra efa notanany sy ny fiofanana norantovony, ary ny fivoriana sy fihaonana iraisam-pirenena nandraisany anjara teto an-toerana sy tany ivelany.
Efa mpikambana tao amin’ny Antenimieran’ny Varotra sy Indostria Faritra Anosy/Androy i MASY Goulamaly. Filohan’ny fikambanana Androy Miavotse Malaky (AMM). Teo amin’ny lafiny politika dia mpikambana tao amin’ny Kongresin’ny Tetezamita (2011-2013) izy nialoha ny nahavoafidy azy ho solombavambahoaka tato Tsihombe, Androy (2014-2019).
Teo amin’ny sehatra iraisam-pirenena i MASY Goulamaly dia mpikambana nanomboka tamin’ny 2015, tao amin’ny UIP (Union Interparlementaire) izay ivondronan’ireo Parlemantera manerantany manabe voho ny demokrasia amin’ny alalan’ny asa sy fifanakalozan-kevitra. Nanomboka tamin’ny 2015 ihany koa izy dia mpikambana ao amin’ny OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques), ary nitarika ny delegasionan’ny Antenimieram-pirenena niatrika ny fihaonambe erantany ikaroham-bahaolana amin’ny fiovaovan’ny toetr’andro (COP) tao Paris tamin’ny 2015.
Ambasadaoron’ny vehivavy Parlemantera manerantany (WIP) teto Madagasikara ihany koa i MASY Goulamaly (15 martsa 2017). Nanampy ny traikefany ny dia nataony tany New-York, Paris, Maroc, Rwanda, Allemagne, Nosy Maurice, Nosy La Réunion, Chine, Indonésie, Island (Reykjavík), Londres (Angletera), Italie ary Espagne.